UWelcome Bhodloza Nzimande – The Ulwazi Programme
UWelcome Nzimande (odume ngelikaBhodloza) wazalwa ngonyaka we-1947 ePhatheni Reserve e-Richmond esifundazweni saKwaZulu Natali.
UNzimande unesitifiketi se-Higher Primary Teacher’s Certificate (HPTC) asithola e-Indaleni Training College (1970). Ngo-1995 uNzimande wathola iziqu ze- B. Admin e-University of Zululand, eMlazi Campus. Ngemuva kwalokho wafundela ukuphathwa nobuholi e-Graduate School of Business (UDW) nase-Gordon Institute of Business Science e-University of Pretoria.
UNzimande uthathe umhlalaphansi ngo-2010 ngemuva kweminyaka engu-32 esebenza eSouth African Broadcasting Corporation (SABC). Ujoyine i-Radio Zulu ngo-Agasti 1978 njengommemezeli, umhumushi nomdidiyeli. UNzimande, naye ofunda izindaba, wethula izinhlelo ezidumile zomsakazo okubalwa kuzo iVuk’ukhanye Afrika (Breakfast Show), iSigiya Ngengoma, Ezidlubhedu, nePhumela Eshashalazini (Face the Press). Ubuye wasebenza njengomethuli wezinhlelo kumabonakude ngokuhlanganisa uhlelo oluthandwayo lomculo wesintu olubizwa nge-Ezodumo. Waqokwa njengoMphathi weSiteshi soKhozi FM ngo-1997.
UNzimande wasebenzisa amandla omsakazo ukusiza ukudambisa udlame lwezepolitiki eNingizimu Afrika lapho isibonelo abaholi bezepolitiki bendawo uMnu uMlaba (IFP) noMnu Radebe (ANC) banikezwa ithuba lokuveza imibono yabo emsakazweni ngesikhathi lapho udlame phakathi kwe amaqembu amabili ayegcwele eHammersdale, eMpumalanga ngaphambi kuka-1994. Uhleloo lwakhe iPhumela Eshashalazini lwaba neqhaza elikhulu ekuqedeni udlame oluholwa yi-IFP ne-ANC eRichmond, enikeza inkundla yokuxhumana nokuphikisana nabalaleli ababukhoma namalungu abezindaba.
UNzimande ubephethe izinhlelo ezahlukahlukene zokwakha umphakathi ezibandakanya ukusungulwa kwe-South African Traditional Music Association (SATMA) noProf Joseph Shabalala weLadysmith Black Mambazo, inhlangano ebambe iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni umculo wesintu nokuvundulula ithalente lomculo KwaZulu-Natal namaphethelo . Lokhu ngo-2005 kwaholela ekwakhiweni kwezindondo zeMusic Music ezibizwa ngama-SATMA awards lapho waba yilungu leBhodi elikhuthele kwaze kwaba yilapho esungula iBhodloza Nzimande Foundation (BNF).
Ngesikhathi ejoyina i-Radio Zulu, lo msakazo wawunabalaleli abangaphezudlwana nje kwezigidi ezintathu kanti njengamanje Ukhozi FM lunabalaleli abayizigidi eziyisithupha. UNzimande wayenguMphathi weSiteshi soKhozi FM cishe iminyaka engu-13 ngesikhathi ethatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi ngoMashi 2010. Ngo-Ephreli 2010, uNzimande wajoyina iMvunonala Investment Consultants.
NgoFebhuwari 2013 waqokwa nguNgqongqoshe Wezabasebenzi ukuthi abenge-Chairperson of the Unemployment Insurance Fund Board (UIF).
Udlule emhlabeni ngoJanuwari 2021 eneminyaka engu-73 ngokugula okuhlobene ne-COVID-19.